Noorway - ALinks
Maqaallada ku saabsan Noorway
Sida Loo Helo Shaqo Noorwey dhexdeeda
November 23, 2020 Maitri Jha shaqo, Norway
Ku dhowaad 14 boqolkiiba dadka Norway guud ahaan waa qaxooti. Seddex meelood meel iyaga ka mid ahi waxay yimaadaan Norway si ay shaqo uga helaan. Tayada nolosha ee laga heli karo Noorway ayaa sii wadaysa inay ka soo jiidato dadka adduunka oo dhan. Helitaanka muuqaal qurux badan, caan ku ah adduunka
Fiisaha Norway ee Hindida
September 14, 2020 Maitri Jha Norway, fiisada
Qorsheynta safar aad ku tageyso Norwey, sidaa darteed tallaabada ugu horreysa, waxaad u baahan tahay inaad dalbato fiiso. Waxaa jira noocyo fiisooyin ah oo aad isticmaali karto. Nooca fiisaha aad u baahan tahay waxay kuxirantahay ujeedada booqashada
Sida loo dalbado Magangalyo gudaha Norwey
August 30, 2020 Maitri Jha Norway, qaxootiga
Ma waxaad dooneysaa inaad Norway joogto, mise waxaad magangelyo ka dooneysaa Norway? Waa inaad tijaabisaa, ama maxaad isku dayi weyday? Shaki kuma jiro, Norway waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan Dunida. Sidoo kale, waxay hoy u tahay inbadan
Ma dooneysaa inaad wax ku barato Norwey? Dib u aqri qodobkaan!
Waxaa laga yaabaa 5, 2020 Maitri Jha Norway, waxbarasho
Qiimaha nolosha ee Noorway waa mid sareeya. Hase yeeshe, inaad wax ku barato Norway ma noqon karto mid qaali ah sida aad u maleyneyso. Maaddaama Jaamacadaha iyo koleejyada aysan ka qaadin khidmadaha waxbarashada ardayda caalamiga ah. Jaamacadaha Norwey ayaa sidoo kale bixiya waxbarasho tayo leh. Sidoo kale, wax ku barashada Norway
Gawaarida Gaadiidka ee Norwey
November 12, 2019 Antika Kumari soo qaado, Norway
Noorway waxay leedahay dhaqamo duug ah oo xaga gaadiidka ah, laakiin wadada, tareenka, iyo gaadiidka cirka ayaa ahmiyadoodii kordhay intii lagu jiray qarnigii 20aad. Cufnaanta dadka oo hooseysa awgeed, gaadiidka dadweynaha xoogaa wuu ka yar yahay dhismaha miyiga Norway, hase yeeshe gaadiidka dadweynaha ee gudaha iyo magaalooyinka waa hagaagsan
Meelaha Dalxiiska ee Sare-Sare ee Norway
November 12, 2019 Antika Kumari Norway
Noorway waa wadan Iskandaneefiyanka ah oo ay ka kooban tahay buuro, baraf-cagaaran, iyo xeeb-xeebeedyo qoto dheer. Oslo, waa magaaladu waa dhul leh dhul-cagaaran iyo matxafyo. Maraakiibta Viking ee qarnigii 9aad oo ilaaliya ayaa lagu soo bandhigaa matxafka Markab Viking ee Oslo. Bergen, oo leh guryo alwaax leh oo midabo leh, ayaa
Daryeelka caafimaadka ee Norwey
November 12, 2019 Antika Kumari caafimaadka, Norway
Nidaamka daryeelka caafimaadka ee Noorway wuxuu ku saleysan yahay mabaadii'da marin u helka guud, baahinta xukunka iyo xulashada daryeel fidiyaha. Iyada oo loo eegayo madax ahaan, kharashka Noorwiijiga ee daryeelka caafimaadka ayaa ah kan ugu sarreeya adduunka. Qof kasta oo ka mid ah Caymiska Qaranka ee Noorweey
Ku keydi lacagtaada Bangiyada Norwey
November 11, 2019 Antika Kumari lacag, Norway
Bangiyada ugu sareeya Norway waa: Bangiga Norwegian AS. Luster Sparebank. Bankiga Storebrand Bank ASA. Waxaa la aasaasay 2006, BN Bank ASA. Dulmarka guud ee Bangiyada Norway Bangiyada Norway waxay ka kooban yihiin 17 bangiyo ganacsi, 105 bangiyo keyd, iyo tiro yar oo bangiyo dowladu leedahay. Hay'adda kormeerka dhaqaalaha ee Noorway ayaa kormeerta
Muuqaalada ugu wanaagsan uguna jaban Norwey
November 11, 2019 Antika Kumari Norway
Magaalooyinka Noorway 1. Dukaankii Noorway / Saga Souvenir Mall ee Norwey waa mid ka mid ah dharka ugu weyn Norwey, qurxinta guriga, hadiyadda iyo dukaamada sharafta leh. Lahaanshaha wax qof walba u leeyahay. Noqo magnet qaboojiyaha leh mowjadda Flam, si maxalli ah
Qiimaha Safarka ee Norwey
November 10, 2019 Antika Kumari Norway
Immisa ayey ku kacaysaa socdaalka Norwey? Immisa lacag ah ayaad ugu baahan doontaa Noorway? kr1,016 ($ 111) waa celceliska qiimaha maalinlaha ee safarka Norwey. Celceliska qiimaha cuntada ee Norwey hal maalin waa kr274
1 2 Xogta ku xiga»